बिहेको ३ हप्ताअघि जोन सीना र निकी बेलाको ब्रेकअप, किन छुट्यो ६ वर्षको सम्बन्ध ?
HOME » बिहेको ३ हप्ताअघि जोन सीना र निकी बेलाको ब्रेकअप, किन छुट्यो ६ वर्षको सम्बन्ध ?
एजेन्सी। २०१८ मा एक चर्चित हलिउड जोडीको ब्रेकअप भएको छ । चर्चित अमेरिकन अभिनेता तथा रेसलर जोन सीनाले आफ्नी हुनेवाली पत्नी निकी बेलासँग ब्रेकअपको घोषणा गरेका हुन् । यी दुई ६ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । बिहेको ३ हप्ताअघि जोनले ब्रेकअपको जानकारी दिएका हुन् । यी दुईले आफुहरुबीच भइसकेको बिहेको इन्गेजमेन्ट पनि रद्द गरेका छन् ।
युएल विक्लीलाई दिएको साझा बयानमा यी दुवैले ब्रेकअपको पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि यी दुवैले ब्रेकअपको कारण भने खुलाउन चाहेनन् । उनीहरु दुवैको साझा भनाइ भन्दै पत्रिकाले लेखेको छ ‘यो फैसला गर्नु निकै मुस्किल थियो । छुट्टिएपछि पनि हामी दुवैले एक अर्कालाई माया र सम्मान दिनेछौं । कृपया जीवनको यो कठिन मोडमा हाम्रो व्यक्तिगत गोप्यताको सम्मान गरियोस् ।’ यी दुईको सम्बन्ध २०१२ मा सुरु भएको थियो । २०१७ मा उनीहरुबीच इन्गेजमेन्ट भएको थियो । जोनले निक्कीलाई रेसलमेनिया ३३ को मञ्चमै प्रपोज गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : शान्ति शान्ति विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत